Lexus iyo Toyota si ay u qaataan tikniyoolajiyadda CarPlay ee bilaabmaya sanadka soo socda | Waxaan ka socdaa mac
Lexus iyo Toyota si ay u qaataan tiknoolajiyada CarPlay ee bilaabmaya sanadka soo socda
Tan iyo markii ay si rasmi ah ugu soo bandhigtay WWDC 2014, teknoolojiyada CarPlay waxyar yar ayaa ahaa waxa ay xiiseeyeen soo saarayaasha gawaarida ee kaladuwan Maanta, badankood waxay horey noo siinayaan iswaafajin nidaamkan noo ogolaanaya inaan ka maamulno waxyaabaha aaladdayada shaashadda gawaarida muraayadaha badan.
Waqtigan xaadirka ah, qaar badan ayaa ah soo saarayaasha qaatay tiknoolajiyaddan markay hubiyaan sida nidaamyadooda badan ee warbaahinta loo adeegsado u ahaa mid duugoobay oo aan waxtar u lahayn isticmaaleyaasha, marka lagu daro inaanay soo jiidasho u lahayn iibsadayaasha mustaqbalka. Laakiin maanta, maahan dhammaan soosaarayaasha inay ku soo bandhigaan nidaamkan isku xirnaanta fara badan ee leh iPhone-keena. Toyota iyo Lexus, iyaga oo aan sii socon, waxay bilaabi doonaan inay hirgeliyaan laga bilaabo 2019.
Sida laga soo xigtay shirkadda Japan, moodelkii ugu horreeyay ee soo saara tiknoolajiyaddan ayaa noqon doona nooca Avalon, iyadoo hadhowna lagu kordhin doono moodooyinka kale ee shirkadda, tan iyo markii hore Toyota waxay tikniyoolajiyaddan ka soo saari doontaa Mareykanka, sidaa darteed isticmaalayaasha yurubiyanku waa inay sugaan dhowr bilood si ay ugu raaxaystaan. CarPlay waxay la jaanqaadi doontaa dhammaan gawaarida leh Entune Media Center OS nooca 3.0 ama ka dib.
Entune 3.0 waxaa hadda laga heli karaa dhowr gawaarida shirkadda ahLaakiin ma awoodi doonaan inay ku raaxaystaan ​​CarPlay illaa sanadka soo socda. Afhayeenka shirkadda ku dhawaaqday daah-furkan, ma uusan awoodin inuu caddeeyo, ama uusan rabin, wax ku saabsan in hirgelinta ay noqon doonto mid xarig ah ama xarig la aan. Laakiin ma noqon doonto shirkadda kaliya ee soo saareysa inay korsato CarPlay gawaarideeda, maadaama shirkadda baabuurta qaaliga ah ee Toyota, Lexus, ay sidoo kale qaadan doonto nidaamkan sanadka 2019 oo dhan.
Toyota waxay ku biirtay liiska dheer ee soosaarayaasha hadda bixiya CarPlay gudaha Mareykanka, liis ka kooban Ford, General Motors, Fiat Chrysler, BMW, Audi, Mercedes-Benz, Honda, Hyundai, Kia iyo Volkswagen. Maanta, CarPlay waxaa laga heli karaa in ka badan 200 oo samee iyo moodello adduunka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Lexus iyo Toyota si ay u qaataan tiknoolajiyada CarPlay ee bilaabmaya sanadka soo socda
Faviconographer waxaa lagu casriyeeyay shaqooyin cusub iyo qaladaadka cilladaha
Shaandhaynta asturnaanta ee 13-inch MacBookga ah